Sir Ba 's Note ဆြာဘရဲ့မှတ်စု: 2009
စိန်တင့်လွင်မြန်မာဆိုင်းအဖွဲ့၊ မြို့မတူရိယာ အသင်းတို့က တီးခတ်ပေးကာ
အကပညာရှင် ဒေါ်ခင်ဝင်းနွယ် နဲ့အတူ ယိမ်းအဖွဲ့၊ လူရွှင်တော်များ တွဲဖက်ကာ
ဗုံလေးလုံးသံစဉ်၊ ဂန္ထ၀င်အကပဒေသာ အမည်ရတဲ့ မှတ်တမ်းဗီစီဒီခွေအတွက်
စက်တင်ဘာလ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက် နေ့များက မန္တလေးမြို့ Oriental House ခန်းမမှာ
စာရေးဆရာဆူးဌက်က စီစဉ်ပြီး Oriental House မှ ဒေါ်ခင်စောဦးရဲ့
ရိုက်ကူးပေးပါတယ်။ အသံနှင့်မီးပိုင်းဆိုင်ရာများကို ဦးချိုလေးနှင့်သား
ကိုသန့်ဇင် (သီတဂူ နွေငြိမ်း)အဖွဲ့က တာဝန်ယူပေးပြီး
ဦးရွှင်မြိုင်(မြို့မ)၊ ဦးရဲထွေး (မြို့မ)၊ စိန်တင့်လွင် တို့က ဂီတမှူး
- ရတနာပုံမ်မန္တလေးခေတ်က တောက်ပထိန်ညီးခဲ့တဲ့ မြန်မာ့နန်းတွင်း
- မန္တလေး ခေတ်တလျှောက်မှာ ထင်ရှားခဲ့ပြီး အဆင့်မြင့်မားတဲ့
- ရတနာပုံမ်နန်းတွင်းအကများနဲ့မြန်မာအကဗေဒရဲ့ အခြေခံကကွက်များကို လေ့လာ
သင်ယူလိုသူများအတွက် မူမှန်စနစ် ဖြစ်စေလိုခြင်း၊
- မြန်မာ့ဂီတရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ ဗုံလေးလုံးမှသည်
မြန်မာ့ဂန္ထ၀င်ခေတ်ပေါ်တေးသွားသံစဉ် များကို မြန်မာနှင့်ကမ္ဘာပေါင်းစပ်တဲ့
တူရိယာများနဲ့ ၀ိုင်းဖွဲ့တီးမှုတ်ကာ မြန်မာအကများနဲ့
မန္တလေး ပန်တျာနှင့်အနုပညာသင်ကျောင်းရဲ့ ပထမဆုံးအမျိုးသမီးအကသင်တန်းနည်းပြ
ဆရာမကြီး ဒေါ်သြဘာသောင်းရဲ့ ပညာအမွေများကို ရရှိခဲ့တဲ့
နောက်ဆုံးတပည့်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်ဝင်းနွယ် ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင် ကာ ၁၉၅၃
ခုနှစ်ကတည်း က မန္တလေးပန်တျာကျောင်းမှာ သင်ရိုးအဖြစ် တီထွင်သင်ကြားခဲ့တဲ့
ဒေါ်သြဘာသောင်း ရဲ့ အမျိုးသမီးကဗျာလွတ် ပထမအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယအဆင့်
ကကွက် ၇၅ ကွက်နဲ့ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထပ်မံတိုးချဲ့ တီထွင်ခဲ့တဲ့
ဒေါ်သြဘာသောင်းရဲ့ အမျိုးသမီးကဗျာလွတ် စတုတ္ထဆင့်၊ ပဉ္ဓမဆင့် ကကွက် ၅၀
ကွက်တို့ကို အခြေခံပြီး မြန်မာသီချင်းကြီးတေးသွားများ၊
မြန်မာ့ရှေးရိုးတပင်တိုင်အကများကို ကပြ မှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်စု sayaba at 12:32 AM No comments:
ကာတွန်းဏီမှူး (၆၄ နှစ်) ကွယ်လွန်
ကာတွန်းဏီမှူး (၆၄ နှစ်) အသည်းရောဂါနဲ့ ဒီနေ့ မနက် ၁း၂၀
နာရီကကွယ်လွန်သွားပြီး ဒီနေ့ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ က တောင်မြင့်သုဿန်ပို့ဆောင်
( ဇော်ဝမ်းကလည်း ၆၄ နှစ်၊ ကံချွန် ကလည်း ၆၄ နှစ်)
မှတ်စု sayaba at 1:27 PM No comments:
ကံချွန်ရဲ့ ၁၅ သိန်းတန် ပန်းချီကား
ဆရာ ကံချွန်ရဲ့ ပန်းချီပြပွဲ (သြဂုတ် ၁၅ - ၂၀) မှာ ပြသခဲ့တဲ့
၁၅ သိန်းတန် ပန်းချီကားပါ ...
မှတ်စု sayaba at 7:27 AM No comments:
ကံချွန် ရဲ့ ရေးဆေးပန်းချီလက်ရာ
ဆရာ ကံချွန် ရဲ့ ပန်းချီပြပွဲမှာပြသခဲ့တဲ့ ရေးဆေးပန်းချီလက်ရာလေးပါ ....
မှတ်စု sayaba at 7:26 AM No comments:
မန္တလေးမြို့ ကံရွာနေ (ဦးဘဌေး+ဒေါ်အေးရွှင်)တို့၏ သားကြီး
မန္တလေးမြို့ ဒေါနခြံရပ်နေ ဦးဗိုလ်မောင်+ဒေါ်ခင်သန်းဌေး၊
မောင်အောင်မျိုးဦး၊ မောင်ကျော်မင်းဦး၊ မနှင်းပွင့်ဖြူတို့၏ ချစ်လှစွာသောအဖိုး
မိုဟမ္မဒ်ဘွမ္မာန်ဘိုင် (ခ) ဦးကံချွန်
အသက် ၆၄ နှစ်
၂၀-၈-၀၉ နေ့ ညနေ ၃း၃၀ ခန့်တွင် အမှတ် ၄ ရပ်ကွက် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်
မြို့သစ် သိုးခြံ မန္တလေး နေအိမ်တွင်ကွယ်လွန်
၂၁-၈-၀၉ မွန်းလွဲ ၁း၃၀ နာရီတွင် သိုးခြံဗလီဂျွမ္နာနမာဇ်အပြီး
ကြာနီကန်သုဿန်သို့ ပို့ဆောင် သဂြိုလ်မည်။
မှတ်စု sayaba at 10:56 PM 1 comment:
စာရေးဆရာ ကာတွန်းဆရာ ပန်းချီဆရာ ကံချွန်
ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲက ကွယ်လွန်သွားပါပြီ ...
မနက်ဖန် ကြာနီကန်ကို နေ့ ၁ နာရီမှာ ပို့ဆောင်မှာပါ ..
မှတ်စု sayaba at 6:51 PM No comments:
ရတနာပုံ FC ရှုံးပွဲမရှိ ဆက်လက်ချီတက်
ရတနာပုံFC ဘောလုံးအသင်းနဲ့ အိန္ဒိယကလပ် အရှေ့ဘင်ဂေါအသင်းတို့ ခြေစမ်းပွဲကို
သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ မန္တလေး ဗထူးအားကစားကွင်းမှာ ကစားရာ
ရတနာပုံ FC အသင်းက အရှေ့ဘင်ဂေါအသင်းကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရသွားပါတယ် ..
ရတနာပုံ FC ရှုံးပွဲမရှိ ဆက်လက်ချီတက်နေပါတယ် ...
မှတ်စု sayaba at 8:46 AM No comments:
မန္တလေးက ဗြဟ္မစိုရ် အခမဲ့ဆေးခန်းဖွင့်မည် ...
မန္တလေးမြို့ ၆၂ လမ်း၊ ၃၃ နှင့် ၃၄ လမ်းကြားက
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေး အခမဲ့ကုသပေးမယ့် ဆေးပေးခန်းမှာ မေတ္တာရှင်
ကိုယ်တိုင် ဝေဒနာရှင်များကို ကုသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များမှာ မနက် ၈ နာရီကနေ ၁၀ နာရီထိ
နောက်ပိုင်းမှာ အချိန်တိုးပြီးဖွင့်မှာဖြစ်သလို နေ့စဉ်
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကစတင်ပြီး ကျန်းမာရေးကူညီမှု လုပ်ငန်းကို ပူးတွဲဆောင်ရွက်ပေးရာ
၉ နှစ်တာကာလအတွင်း လူနာ ၂၆၀၈၀ ဦးကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင် ခဲ့ပါတယ်။
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ ခုတင် ၃၀၀ ဆန့်ဆေးရုံကြီး၊ မျက်စိ နား
နှာခေါင်း လည်ချောင်း ဆေးရုံကြီးများမှာ
တက်ရောက်ကုသနေတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးဝေဒနာရှင်များကို သက်ဆိုင်ရာ
လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး လိုအပ်သလို အချန်မီအကူအညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်းအတွက် အလှူရှင်များရဲ့ လှူဒါန်းမှုနဲ့ တစ်လကို
သိန်း ၇၀ ကျော်သုံးစွဲရပါတယ်။
အလှူရှင်များရဲ့စေတနာနဲ့ ဝေဒနာရှင်ပေါင်းများစွာကို ကူညီပေးတဲ့
မွန်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်ကူညီလို တယ်ဆိုရင်
ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်း ဖုန်း ၀၂-၆၆၄၀၀၊ ၀၂-၃၉၁၄၃
မှတ်စု sayaba at 10:01 PM No comments:
ရတနာပုံFC ဘောလုံးအသင်းနဲ့ အိန္ဒိယကလပ် အရှေ့ဘင်ဂေါအသင်းတို့ ခြေစမ်းပွဲ မန္တလေးမှာ ကစားမယ်
သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ မန္တလေး ဗထူးအားကစားကွင်းမှာ ကစားကြမယ် ....
ကွင်းဝင်လက်မှတ်က အထူးတန်း ၂၀၀၀ ကျပ်၊ ရိုးရိုးတန်း ၁၀၀၀ ကျပ် ....
မှတ်စု sayaba at 9:13 PM No comments:
သင်္ကြန်မင်းသားကြီး ဇော်ဝမ်း ကွယ်လွန်ပြီ
သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ ညက ရန်ကုန်အင်းစိန်ကဆေးခန်းတစ်ခုမှာ သင်္ကြန်မင်းသားကြီး
ဇော်ဝမ်း ကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့ ..
သင်္ကြန်မိုးဇာတ်ကားမှာ အလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့
မန္တလေးသင်္ကြန်မှာ ပျော်တတ်တဲ့ အတာဆိုတဲ့ အနုပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးပါ ..
မန္တလေးသားမို့ မန္တလေးကို ချစ်တွယ်ပေမယ့် ရန်ကုန်မှာ ကွယ်လွန်သွားရပြီပေါ့ ..
မှတ်စု sayaba at 9:10 PM No comments:
စစ်ကိုင်းတောင်မှာ ဆွမ်းလောင်းကြတယ် ...
စစ်ကိုင်းတောင်မှာ ဆွမ်းလောင်းအသင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ် ..
သံဃာတော်တွေကို အာရုံဆွမ်းရော၊ နေ့ဆွမ်းပါကပ်တယ် ..
သာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အတွက် ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ..
www.everyonit.com ဆိုတဲ့လိပ်စာမှာ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြည့်နိုင်တယ် ..
အဲ .. သီလရှင်တွေအတွက် ဆောင်ရွက်ကြတာနည်းတယ် ..
သီလရှင်တွေအတွက်လည်း စဉ်းစားကြပါဦး ..
နောက်မှပဲ မန္တလေးမှာ သီလရှင်တွေအတွက်
သီးသန့်ဆောင်ရွက်နေတာလေးတွေပြောပြဦးမယ် .. သူငယ်ချင်း ...
မှတ်စု sayaba at 7:00 AM 1 comment:
အချိန်တန်ပြီ သူငယ်ချင်းတို့ရေ ....
မှတ်စု sayaba at 10:10 PM No comments:
လူတိုင်း အရက်သမားဖြစ်ရမည် ဆိုတဲ့ စီမံချက်များလား ...
အမှတ် ၁ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၊ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမှ
အထူးစီမံချက်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားသည်ဆိုတဲ့ ဆိုင်က ကြော်ငြာစာသားလေးပါ ..
ဘီအီးလောက်တောင်အဆင့်မရှိတော့တဲ့ အရက်များလားမသိပါဘူး ..
မန္တလေးယူပီ တစ်ပတ် ၅၀ ပါတဲ့ ...
ဒီ့အရင်ကတော့ မန္တလေးရမ်တစ်ပတ် ၁၀၀ ဆိုပြီး မန္တလေးမြို့ရဲ့ နေရာအတော်များများမှာ
ဆိုင်တွေ ဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးရောင်းတယ် ..
တစ်ပတ် ၅၀ ဆိုတော့လည်း လူစည်တာပါပဲ ..
စဉ်စားမိတာပါ .. သူငယ်ချင်းတို့ရေ ..
ကျုပ်စဉ်းစားတာ ကလေးအတွေးဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ ...
အမှတ် ၁ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး စီမံချက်ဆိုလို့ပါဗျာ ..
ဆိုင်တွေကတော့ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နေရတာပဲ ..
မှတ်စု sayaba at 10:04 PM No comments:
မှတ်စု sayaba at 11:06 PM No comments:
်forward mail မှ? တွေ?လ????၇??့ ?ံ?ပြင်??်ပု?်ပါ ..
စမ်းသပ်မှု တစ်ခုမှာ လူတွေက မျောက်ငါးကောင်ကို လှောင်အိမ်တစ်ခုထဲ ထည့်ပြီး
လှောင်အိမ်ထိပ်မှာ ဌက်ပျောသီး တစ်ခိုင်ကို ချိတ်ဆွဲထားလိုက်တယ်။
အော်တိုစမ်းသပ် ခလုတ်တစ်ခုလဲ တပ်ဆင်ထားပြီး မျောက်တွေက ဌက်ပျောသီးကို
သွားယူမယ်လို့ ကြံခဲ့ရင် လှောင်အိမ်ကို ရေတွေနဲ့ ချက်ချင်း ပက်ဖြန်းတာ
စစချင်း မျောက်တစ်ကောင်က ဌက်ပျောသီးကို ယူဖို့ကြံတော့
ရေနဲ့ပက်ခံလိုက်ရတယ်။ မျောက်ငါးကောင်လုံး ရေတွေ စိုကုန်တာပေါ့။
ကျန်တဲ့မျောက်တွေလည်း စမ်းကြည့်ကြတယ်။ ရေပက်ခံရတာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့
မျောက်တွေက ဌက်ပျောသီးကို မယူရင် ရေပက်မခံရဘူး..ဒါကြောင့် ဌက်ပျောသီးကို
သွားမယူဖို့ အားလုံးက သဘောတူ ဆုံးဖြတ် လိုက်ကြတယ်။
နောက်တော့ စမ်းသပ်တဲ့လူတွေက မျောက်တစ်ကောင်ကို အသစ်တစ်ကောင်နဲ့
လဲလိုက်တယ်။ (မျောက်ညိုလို့ ဆိုပါစို့)။ လှောင်အိမ်ထဲ အသွင်းခံရတဲ့
မျောက်ညိုဟာ ဌက်ပျောသီးကို မြင်တာနဲ့ ချက်ချင်း သွားယူမလို့ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တစ်ကောင်ကောင်က ဌက်ပျောသီးယူမယ်လို့ ကြံလိုက်ရင် ရေပက်ခံရမယ်
ဆိုတာကို သိတဲ့ ကျန်မျောက် (၄)ကောင်ရဲ့ အထုအထောင်းကို ခံလိုက်ရတယ်။
မျောက်ညိုက ယူဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားကြည့် တယ်။ ယူဖို့ ကြံလိုက်တိုင်း
အထုအထောင်းပဲ ခံနေရတော့ နောက်ဆုံး လက်လျော့လိုက်ရတယ်။ မျောက်
ငါးကောင်စလုံးက ရေပက် မခံရတော့ဘူးပေါ့။
စမ်းသပ်တဲ့လူတွေက နောက်မျောက်တစ်ကောင်ကို အသစ်တစ်ကောင်နဲ့
လဲလိုက်ပြန်တယ်။ (မျောက်ဖိုးစိန် ဆိုပါတော့)။ မျောက်ဖိုးစိန်လည်း
မျောက်ညို အတိုင်းပဲ လှောင်အိမ်ထဲ ၀င်လာတာနဲ့ ဌက်ပျောသီးကို ယူဖို့
ကြံတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျန်မျောက်တွေရဲ့ အရိုက်ကိုပဲ ခံလိုက်ရတယ်။
မျောက်ညိုကလည်း အရိုက်ခံထား ရဖူးတော့ မျောက်ဖိုးစိန်ကို ကျန်မျောက်တွေ
၀ိုင်းရိုက်နေတုန်း သူလဲ ဆွမ်းကြီး ၀င်လောင်းတာပေါ့။ မျောက်ဖိုးစိန်လည်း
ယူဖို့ကြံတိုင်း အရိုက်ပဲ ခံနေရတော့ လက်လျော့လိုက်ရတယ်။
အဲလိုနဲ့ စမ်းသပ်တဲ့လူတွေက မျောက်တွေကို တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင် အသစ်တွေနဲ့
လဲလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံး မျောက်ငါးကောင်လုံးဟာ အသစ်တွေပဲ ဖြစ်ကုန်တယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ကောင်မှ ဌက်ပျောသီးကို သွားမယူရဲကြဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ
သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း မသိဘူး။ သွားယူရင် အရိုက်ခံရမယ် ဆိုတာပဲ သိတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဌက်ပျောသီးကို သွားယူရင် ရေပက်ခံရမယ်ဆိုတာကို သိတဲ့
မျောက် လား....? အရိုက်ခံရမယ် ဆိုတာကိုပဲ သိတဲ့ မျောက်လား......?
လူထုဦးလှ ကွယ်လွန်တာ ၂၇ နှစ်ပြည့်ပြီ
ဒီနေ့ လူထုဦးလှ ကွယ်လွန်တာ ၂၇ နှစ်ပြည့်ပါပြီ
မေမြို့ (ပြင်ဦးလွင်)မှာ သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းကပ်လှူပြီး အမျှပေးဝေကြမှာပါ ..
နောက်နှစ်မှာ လူထုဦးလှ နှစ် ၁၀၀ ပြည့်ပွဲလုပ်မယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ..
မန္တလေးမှာ နာရေးကူညီမှုအသင်းတွေ ၄၀ ကျော်ရှိနေပြီ။
အသင်းတစ်သင်းကို နာရေးကား ၂ စီးရိတယ်။
ဒါကြောင့် နာရေးပို့ယာဉ် စုစုပေါင်း ကား ၈၀ လောက်ရှိပြီ။
ဒါတောင် တစ်ချို့အသင်းတွေက ကား ၂ စီးမကရှိနေတယ်။
များသောအားဖြင့် လိုင်စင်မဲ့၊ နံပတ်မဲ့တွေပေါ့။
နေ့တိုင်းရော အလောင်းတွေ သုသာန်ပို့ရလို့လားလို့ မေးစရာဖြစ်နေပြီ။
ဟုတ်တယ် ... နေ့စဉ် ဈေးဦးမပေါက်လို့ ထိုင်နေရတဲ့အသင်းတွေ အများကြီးပဲ။
ဒါဆို ဘာလို့ နာရေးအသင်းတွေ ဒီလောက်များလာတာလဲ။
ကုသိုလ်အလုပ် .. ကောင်းသောအလုပ်ပါ။
ဗြဟ္မစိုရ်စတင်တည်ထောင်စဉ်က ရပ်ကွက်တွေက လက်မခံခဲ့ကြတဲ့အလုပ်
အခုတော့ ဒီအလုပ်ကို အကြောင်းပြပြီး နေရာတွေယူချင်နေကြပြီ။
မှတ်စု sayaba at 8:52 AM 1 comment:
မန္တလေးက နာမှုကူညီရေးအသင်းများက လူမှုကူညီရေးအမည်ပြောင်းလဲပြီး
ဆေးခန်းတွေဖွင့်ဖို့ကြိုးစားကြရာမှာ ဗြဟ္မစိုရ်နဲ့ နှိဗ္ဗသုခ အသင်းတွေ
နိဗ္ဗသုခ အသင်းကတော့ ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့် ဖွင့်ခွင့်ရတဲ့နေ့မှာပဲ
နိဗ္ဗာန်သုခအသင်းကို ဖြစ်မြောက်ဖို့ အစကနဦးကထဲကကူညီနေသူ
နာယကကြီး ဦးတင်+ဒေါ်ခင်တိုး သမီး မလွင်လွင် မိသားစုကပဲ
ဆေးခန်းဖြစ်မြောက်ဖို့ သိန်း ၅၀ မတည်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဗြဟ္မစိုရ်အသင်းကတော့ ဆေးခန်းကို သြဂုတ်လလယ်လောက်မှ စဖွင့်မှာပါ ...
နာရေးလိုပဲ မလိုအပ်ပဲ ကားတွေများလာတာမျိုးတော့ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
နာရေးမှာက ကားတွေ လူတွေများလာတာ အရေးမကြီးဘူး
ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ဆမ ရထားတဲ့ ဆရာဝန်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
တတ်ယောင်ကားဆရာဝန်တွေ၊ ရမ်းကု ဆရာဝန်တွေ များလာမှာကို မြင်ယောင်မိတယ်။
ဒီလို မတတ်တတတ်ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့ ဆရာဝန်တွေက နေရာယူလာမှာကို စိုးရိမ်မိတယ်။
မန္တလေးရောက် မောင်သန်းဆွေ (ထားဝယ်)
ရှေးမြန်မာမင်းများရဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်များအကြောင်းကို အများအပြားရေးသားခဲ့တဲ့
စာရေးဆရာ မောင်သန်းဆွေ (ထားဝယ်) ဟာ ဒီနေ့ (၂-၈-၀၉) မနက်က
ရာပြည့်မန္တလေးစာအုပ်ဆိုင်မှာ သူရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်များကို ၀ယ်ယူသူတိုင်း
၀ယ်ယူတဲ့စာအုပ်အတွက်ကိုလည်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ပေးပါတယ်။
မောင်သန်းဆွေ (ထားဝယ်) မန္တလေးမြို့ကို ရောက်ခိုက် စာအုပ်ရောင်းရင်း
ဆွေတော်မျိုးတော်ထဲက တစ်ယောက်က လာပြောနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဆရာ မန္တလေးကိုရောက်ရှိနေခြင်းဟာ တောင်ပြုံးပွဲတော်ကြီးကို လာတယ်လို့လည်း
မှတ်စု sayaba at 10:22 PM No comments:
စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ် website
စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်များ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်မယ့်
website တစ်ခုကို အလှူရှင်တစ်ဦးရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့
www.cittasukha.com မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ ...
လောလောဆယ်တော့ ပို့စ်အဟောင်းတွေကို ပြန်တင်နေပါတယ် ...
မကြာခင်မှာတော့ ပြည့်စုံသွားမှာပါ ......
မန္တလေးမှာ 24 နာရီ မီးလာနေတယ် လို့ပြောကြတယ် ...
မန္တလေးမှာ အာဆီယံစွမ်းအင် အစည်းအဝေးကျင်းပပါတယ် ..
ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ ပြီးပါပြီ ..
ဂျီးတော့မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ ကြေငြာချက်လေးတစ်ခုတွေ့ရတယ် ...
မန္တလေးတွင် အဆီယံစွမ်းအင် အစည်းအဝေးရှိသောကြောင့်
နားလည်သည်းခံခွင့်လွှတ်ကြပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည် တဲ့ဗျာ ...
Myanmar Book Store ရဲ့ မိုးရာသီစာအုပ်ရောင်းပွဲ
Myanmar Book Centre (MBC) က ကျင်းပတာပါ ...
သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က ၁၅ ရက်နေ့ထိ ၅၀၀၀ ကျပ်ဖိုးဝယ်ယူသူများအတွက်
ကျပ် ၅၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ လက်ဆောင်စာအုပ်များထဲမှ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို
ဦးရာလူစနစ်နဲ့ ချက်ချင်းပေးမှာတဲ့ ...
USA, UK, India, Singapore နိုင်ငံများမှ အသစ်ရောက် ရှိလာတဲ့
စာအုပ်ပေါင်း ၅၀၀၀၀ ကျော်၊ ဘာသာရပ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ...
သတ်မှတ်ထားတဲ့ စာအုပ်များကိုလည်း မူရင်းဈေးနှုန်းရဲ့ ၆၀ မှ ၇၀
ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဈေးလျော့ကာ ရောင်းချပေးသွားမယ်ဆိုပဲ ...
- အမှတ် ၅၅၊ ဗဟိုလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်။
- အခန်း ၃ မြေညီထပ်၊ MAC Tower 1 ၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်
- အခန်း ၄၂၉၊ စတုတ္ထထပ်၊ 78 Shopping Centre
မှတ်စု sayaba at 8:13 AM No comments:
ဒီနေ့ ၂၉-၇-၀၉ .. အိုးပုတ်ခိုးပွဲ ရှိတယ် ...
စဉ့်အိုးလိုမျိုးတောင် ခိုးကြတယ်ပြောပါတယ် ...
မိရင်ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ ပြန်ပေးရုံပါပဲ .. ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတယ် ..
ကဲ .. မန္တလေးသားတို့ရေ ... အိုးပုတ်ခိုးပွဲဆီ ချီတက်ကြမလား ...
မှတ်စု sayaba at 11:00 PM No comments:
Free Download The Voice Weekly Journal
Latest Issue is available.
Monday July 20-26 2009
The Voice Weekly Journal ကို အပတ်စဉ် ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး
မှတ်စု sayaba at 8:26 AM No comments:
မှတ်စုလေးတွေ မတို့ဖြစ်တာကြာပေါ့ ...
ကျော်ခွပြီးတော့လည်းမရေးချင်တာနဲ့ကို မရေးဖြစ်တာ ...
မှတ်စု sayaba at 8:15 AM No comments:
မှတ်စု sayaba at 8:28 AM No comments:
၂၀၀၇ အကယ်ဒမီ ပေးပွဲမှာ မန္တလေးက ကိုးဆယ်ဆသာသွားပါပြီ .....
၂၀၀၇ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာ မန္တလေးက ကိုးဆယ်ဆသာသွားပါပြီ ...
မန္တလေးက ထုတ်လုပ်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုထဲကပဲ ၅ ဆုရသွားပါတယ် ...
နောက်ပြီး မန္တလေးက ဇာတ်ကားဆု၊ ဒါရိုက်တာဆု၊ တေးဂီတဆု သုံးဆုရပါတယ် ....
မန္တလေးက ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး အကယ်ဒမီရတဲ့အတွက် တကယ်ကို ကိုးဆယ်ဆသာသွားပါပြီ ......
၂၀၀၇ ခုနှစ် အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ပွဲ၏ အကယ်ဒမီဆုများကို "ကိုးဆယ်ဆသာလိမ့်မယ်" ဇာတ်ကားမှ အများဆုံး ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့ပါတယ် ...
ယခုနှစ်အ အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ပွဲတွင် ထူးခြားမှုကတော့ အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆုနှင့် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုတို့ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်း မရှိသလို
အခြား အကယ်ဒမီဆုများဖြစ်သည့် ဇာတ်ညွှန်းဆု၊ တည်းဖြတ်ဆု၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုများလည်း ရွေးချယ်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
ဇာတ်ကားဆု - ကိုးဆယ်ဆသာလိမ့်မယ် (မြင့်မာလာ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး)
ဒါရိုက်တာဆု - မြိုတော်မောင်ယဉ်အောင် (ကိုးဆယ်ဆသာလိမ့်မယ်)
အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - ကျော်ရဲအောင် (ကိုးဆယ်ဆသာလိမ့်မယ်)
အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - မိုးဒီ (ကိုးဆယ်ဆသာလိမ့်မယ်)
ရုပ်ရှင်ဓါတ်ပုံဆု - ကျောက်ဖြူ (ပဒေသာ) (ငါ့ဓား ငါ့သွေး ငါ့ဧရာဝတီ)
ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု- စိန်မွတ်တား (ကိုးဆယ်ဆသာလိမ့်မယ်)
ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု - ဆုချီးမြှင့်ခြင်းမရှိပါ။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု - ဆုချီးမြှင့်ခြင်းမရှိပါ။
မှတ်စု sayaba at 6:49 AM No comments:
၂၀၀၇ အတွက် အကယ်ဒမီပေးနေပြီ
၂၀၀၇ အတွက် အကယ်ဒမီပေးပွဲလုပ်နေပါတယ် ...
မန္တလေးက တေးဂီတ စိန်မွတ္တား တို့ရနေကြပြီ .....
မှတ်စု sayaba at 8:40 PM No comments:
ခင်ခင်ထူးရဲ့ ပန်းကြာဝတ်မှုန် လုံးချင်းဝတ္တုစာအုပ် ထွက်ရှိ
မန္တလေးတက္ကသိုလ်နောက်ခံရေးဖွဲ့ထားတဲ့ စာရေးဆရာမ ခင်ခင်ထူးရဲ့
ပန်းကြာဝတ်မှုန် လုံးချင်းဝတ္တု စာအုပ် ထွက်ရှိပါပြီ။
စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့ ၇၈ လမ်း ၃၇ နှင့် ၃၈
လမ်းကြားရှိ Hotel Mandalay မှာ ဇန်န၀ါရီလ ၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီက
မန္တလေးတက္ကသိုလ် နှစ်ကာလများ ကိုလွမ်းမောရင်း ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး
မတူညီတဲ့ဘ၀နှစ်ခု၊ မတူညီတဲ့ဘ၀နှစ်နေရာမှာ ရပ်တည်နေကြ တဲ့ချစ်သူ
(သို့မဟုတ်) သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အာစရိယပူဇော်ပွဲ အတွက် သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရာက ဝေဒနာဟောင်းများ
ပြန်လည် နိုးကြားလာရသလို သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကိုအောင်နိုင်သူက သူ့ဘ၀
သူ့ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ ရင်ဖွင့်သံက ၀တ္တုဖန်တီးဖို့ ဖြစ်လာရတယ်လို့
မန္တလေးတက္ကသိုလ်နယ်မြေမှာရှိတဲ့ အဆောက်အအုံတွေ၊ စာသင်ဆောင်တွေ၊ သစ်ပင်တွေ၊
လမ်းတွေကို ကြည့်ရှုခံစားသလို သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ပြန်ပြောင်းအောက်
မေ့ဖွယ်သတင်းစကားတွေကလည်း ၀တ္တုအတွက် အကျိုးရှိစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသေးတယ်။
၀တ္တုမှာ မြန်မာ စာပေအငွေ့အသက်များပါဝင်သလို
မဟာဂီတအကြောင်းအရာအချို့ကိုလည်း လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။
မှတ်စု sayaba at 3:05 PM No comments:
မှတ်စု sayaba at 7:37 AM No comments:
ရတနာပုံFC ဘောလုံးအသင်းနဲ့ အိန္ဒိယကလပ် အရှေ့ဘင်ဂေါအသ...
၂၀၀၇ အကယ်ဒမီ ပေးပွဲမှာ မန္တလေးက ကိုးဆယ်ဆသာသွားပါပြီ...
ခင်ခင်ထူးရဲ့ ပန်းကြာဝတ်မှုန် လုံးချင်းဝတ္တုစာအုပ် ထွ...